LokaChantha: January 2010
သတ္တိယာ - လှံမကြီးဖြင့်၊
သြမဋ္ဌော ဝိယ - ရင်ဝ၌ အထိုးခံသောသူကဲ့သို့၊
ပရိဗ္ဗဇေ - သုတ်သုတ်လျင်စွာ အားထုတ်ရာ၏။
မတ္ထကေ - ဦးခေါင်းထက်၌၊
ဒယှမာနော ဣဝ - မီးလောင်ခံရသောသူကဲ့သို့၊
ပရိဗ္ဗဇေ - သုတ်သုတ်လျင်စွာ အားထုတ်ရာ၏ တဲ့။
သြမဋ္ဌော ဝိယ - ရင်ဝ၌ အထိုးအစိုက် ခံရသော သူကဲ့သို့လည်းကောင်း၊
ဒယှမာနော ဣဝ - မီးအလောင်ခံရသော သူကဲ့သို့လည်းကောင်း၊
ကာမရာဂပ္ပဟာနာယ - ကာမရာဂကို သမထဈာန်တရားဖြင့် ပယ်ရှားရန် အလို့ငှာ၊
ဘိက္ခု - ရဟန်းသည်၊
ဝါ - သံသရာဘေးကို ရှုမြင်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည်၊
သတော - အမှတ်ရလျက်၊
ဒါကြောင့် သန္ဒိဋ္ဌိကော - ကျင့်ကြံအားထုတ်က မုချ ကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်နိုငသော တရားတော်မြတ်ပဲလို့ ဒီလိုလည်း ချီးကျူးပြီး ဟောထားပါတယ်။
Posted by LokaChantha at 5:28 PM No comments:
+ ဗုဒ္ဓဂုဏ်ထူး၊ စိတ်ကြည်နူးလျက်
+ ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃအမွေ၊ မြန်မာ့အမွေကို
+ ပြည်သူအများ၊ လူအများတို့
+ သံဃာတော်များ၊ လမ်းညွှန်ကြားသည့်
+ တည်ထားပြီးပြီ၊ မြတ်စေတီနှင့်
လောကချမ်းသာ ဓမ္မာရုံ ယောဂီဆောင် ကျောင်းဆောင်တော်ကြီး၏ previsualized 3D images ကို ‘ကိုထွန်းထွန်း’က ကျေးဇူးပြု၏။
Posted by LokaChantha at 12:19 PM No comments:
ဦးဇင်းတို့ အဘိဓမ္မာမှာ ခေါ်တဲ့ ‘ပညာ’ဆိုတာ ကုသိုလ်နဲ့ ယှဉ်တာ ကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ ယှဉ်တာကိုသာ ‘ပညာ’လို့ ခေါ်တယ်။
အကုသိုလ်နဲ့ ယှဉ်တာကို ပညာလို့ မခေါ်ဘူး။
ဒီလူ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်များတယ်လို့ ပြောလေ့ရှိတယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီလိုဟာမျိုးကို ဦးဇင်းတို့က ပညာလို့ မခေါ်ဘူး။ ဒါကို ‘လောဘ သို့မဟုတ် ဒေါသပြဋ္ဌာန်းတဲ့ မာယာ’အနေနဲ့သာ ခေါ်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာ ‘ပညာ’လို့ ပြောလိုက်ပြီဆိုရင် အကောင်းနဲ့တွဲတာကိုသာ ‘ပညာ’လို့ ခေါ်တာ။
ထို့အတူပဲ ‘သတိစေတသိက်’ဟာ သောဘနစိတ်တွေနဲ့သာ ယှဉ်တယ်။ မကောင်းတာတစ်ခု ပြုဖို့ သတိရတာဟာ ‘သညာစေတသိက်’သာ ဖြစ်တယ်။ နေ့စဉ်သုံးစကားမှာ သတိကို ကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်း သုံးတယ်။ မကောင်းတဲ့ နေရာလည်း သုံးတယ်။ အဘိဓမ္မာအရတော့ ‘သတိ’ဆိုတာ ‘ကောင်းတာကိုသာ’ ‘သတိ’ ခေါ်တယ်။
စိတ်နဲ့စေတသိက် ယှဉ်ပုံက ၂-မျိုး ရှိတယ်။
ပထမနည်းက သမ္ပယောဂနည်းလို့ ခေါ်တယ်။ စေတသိက်ကို ကိုင်ပြီးတော့ ဒီစေတသိက်ဟာ စိတ်ဘယ်လောက်နဲ့ ယှဉ်သလဲ? စိတ်ဘယ်လောက်နဲ့ အတူတူ ဖြစ်သလဲ? အဲဒါ ရှာတဲ့နည်းကို သမ္ပယောဂနည်းလို့ ခေါ်တယ်။
ဒုတိယနည်းကို သင်္ဂဟနည်းလို့ ခေါ်တယ်။ သူ့ကျတော့ စိတ်ကို ကိုင်ပြီးတော့ စေတသိက်ရှာတဲ့နည်းပေါ့။ စိတ်တစ်ခုမှာ စေတသိက် ဘယ်လောက်နဲ့ ယှဉ်သလဲ? စိတ်တစ်ခုနဲ့ စေတသိက်တွေ ဘယ်လောက် အတူတူ ဖြစ်သလဲ?လို့ အဲဒီလို လေ့လာတဲ့နည်းကို သင်္ဂဟနည်းလို့ ခေါ်တယ်။
သမ္ပယောဂနည်း မလေ့လာခင် စိတ် ၁၂၁ ပါး အကြောင်း ကျေကျေညက်ညက် နားလည်ထားဖို့ လိုတယ်။
စိတ် ၁၂၁ ပါးကို တူရာလေးတွေ ပေါင်းပြီး ဇယားကွက်မှာ ပြထားတယ်။
အကုသိုလ်စိတ် ၁၂ ပါး (လောဘမူ ၈၊ ဒေါသမူ ၂၊ မောဟမူ ၂)
အဟိတ်စိတ် ၁၈ ပါး၊ (ဒွေးပဉ္စဝိညာဉ် ၁၀၊ သမ္ပဋိစ္ဆန ၂၊ ဥပေက္ခာ သန္တီရဏ ၂၊ သောမနဿ သန္တီရဏ ၁၊ ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန ၁၊ မနောဒွါရာဝဇ္ဇန ၁၊ ဟသိတုပ္ပါဒ ၁)
ကာမာဝစရသောဘနစိတ် ၂၄ ပါး (မဟာကုသိုလ် ၈၊ မဟာဝိပါက် ၈၊ မဟာကြိယာ ၈)
ရူပါဝစရစိတ် ၁၅ ပါး (ပထမဈာန်စိတ် ၃၊ ဒုတိယဈာန်စိတ် ၃၊ တတိယဈာန်စိတ် ၃၊ စတုတ္ထဈာန်စိတ် ၃၊ ပဉ္စမဈာန်စိတ် ၃)
အရူပါဝစရစိတ် ၁၂ ပါး၊
လောကုတ္တရာစိတ် အကျဉ်း ၈ ပါး၊ အကျယ် ၄၀ (မဂ် ၄ ပါး + ဖိုလ် ၄ ပါးနှင့် ဈာန် ၅ ပါး ပွားသော သောတာပတ္တိမဂ်ပထမဈာန်, သကဒါဂါမိမဂ်ပထမဈာန်, အနာဂါမိမဂ်ပထမဈာန်, အရဟတ္တမဂ်ပထမဈာန် ၄ ပါး၊ ………၊ ….. အရဟတ္တဖိုလ် ပဉ္စမဈာန် ၄ ပါး။)
ကောင်းပြီး၊ အဲဒီစိတ် ၁၂၁ ပါးနဲ့ စေတသိက်နဲ့ ယှဉ်တာတွေကို လေ့လာကြရအောင်။
သဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏ စေတသိက် ၇ ပါး
စေတသိက်တွေမှာ ပထမအုပ်စုက သဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏ စေတသိက် ၇ ပါး (ဖဿ၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ စေတနာ၊ ဧကဂ္ဂတာ၊ ဇီဝိတိနြေ္ဒ၊ မနသိကာရ)။
စိတ်အားလုံးနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့၊ စိတ်အားလုံးနဲ့ ယှဉ်တဲ့ စေတသိက်တွေလို့ ဆိုတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ သဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏစေတသိက်နဲ့ ယှဉ်တဲ့ စိတ် ဘယ်လောက်ရှိတုန်းလို့ မေးရင် အလွယ်လေးပဲနော်။ ရှိသမျှစိတ်တွေ အကုန်ပေးလိုက်ရုံပဲ။ ၈၉ သို့မဟုတ် ၁၂၁ ပါး။
လယ်တီဆရာတော်ကြီး၏ ပရမတ္ထသံခိပ် လင်္ကာ
“သဗ္ဗစိတ္တေ၊ ခုနစ်ထွေ၊ ယှဉ်လေ စိတ်အားလုံး”
ဝိတက်စေတသိက်က အကုသိုလ်စိတ် ၁၂ ပါးလုံးနဲ့ ယှဉ်တယ်။
အဟိတ်စိတ်ထဲက ဒွေးပဉ္စဝိညာဉ် ၁၀ နဲ့ မယှဉ်ဘူး။ မြင်တဲ့စိတ်, ကြားတဲ့စိတ်, နံတဲ့စိတ်, အရသာသိတဲ့စိတ်, ထိတဲ့စိတ်နော်၊ ဒီ ၅ မျိုး (အကုသလဝိပါက် ၅ ပါး + အဟိတ်ကုသလဝိပါက် ၅ ပါး၊ ပေါင်း ၁၀ ပါး)က အာရုံနဲ့ ဝတ္ထု ထိခိုက်မှု ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဝိတက်က တင်ပေးဖို့ မလိုဘူး။ စိတ်ဟာ အလိုလိုပဲ အာရုံပေါ် ရောက်သွားနိုင်တယ်။ ဒီတော့ အဟိတ်စိတ်ထဲက ကျန် ၈ ပါးနဲ့သာ ယှဉ်တယ်။
ကာမာဝစရသောဘနစိတ် ၂၄ ပါးလုံးနဲ့ ယှဉ်တယ်။
ရူပါဝစရစိတ်တွေထဲက ပထမဈာန်စိတ် ၃ ပါးနဲ့ ယှဉ်တယ်။
အရူပါဝစရစိတ်တွေထဲမှာ ယှဉ်တာ မရှိဘူး။
လောကုတ္တရာစိတ်ထဲက ပထမဈာန် မဂ် ၄ ပါး၊ ပထမဈာန် ဖိုလ် ၄ ပါး၊ ပေါင်း ၈ ပါးနဲ့ ယှဉ်တယ်။
အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ ဝိတက်ယှဉ်တဲ့ စိတ်ပေါင်း ၅၅ ပါး ရှိတယ်။
“ပဉ္စဝိညာဏ်၊ ကြဉ်တုံပြန်၊ ကာကျန် လေးဆယ့်လေး။
ပဈာန်ဆယ့်တစ်၊ လောင်းတုံလစ်၊ ‘တက်’ဖြစ် ပဉ္စေးစေး။”
(ကာမစိတ် ၅၄ ပါးတွင် ဒွေးပဉ္စဝိညာဉ် ၁၀ ပါး ဖယ်ကြဉ်က ၄၄ ပါး ကျန်၏။ ရူပါဝစရ ပထမဈာန် ၃ ပါး + လောကုတ္တရာမဂ် ပထမဈာန် ၄ ပါး + လောကုတ္တရာဖိုလ် ပထမဈာန် ၄ ပါး = ပေါင်း ပထမဈာန် ၁၁ ပါးနှင့် ပေါင်းသော် ၅၅ ပါး ဖြစ်၏။)
တနည်း ဝိတက်မယှဉ်သော အဟိတ်စိတ်မှ ဒွေးပဉ္စဝိညာဉ် ၁၀ + ရူပါဝစရ ဒုတိယဈာန်မှ ပဉ္စမဈာန်တိုင်အောင် ၁၂ ပါး + အရူပါဝစရ ၁၂ ပါး + လောကုတ္တရာစိတ်မှ ၃၂ ပါး = ပေါင်း ၆၆ ပါးကို စိတ် ၁၂၁ ပါးမှ နုတ်သော် ဝိတက်ယှဉ်သော စိတ် ၅၅ ပါး ရ၏။
ဝိစာရအတွက်ကား ဝိတက်ယှဉ်တဲ့ ၅၅ ပါးတွင် ဒုတိယဈာန်စိတ် ၁၁ ပါး ထည့်ပေါင်းက ၆၆ ပါး ဖြစ်၏။
“ငါးဆယ့်ငါးတန်၊ ‘တက်’ဖြစ်ရန်ဝယ်၊ ဒု-ဈာန် ဆယ့်တစ်၊ လောင်းတုံလစ်၊ ‘စာ’ဖြစ် ဆဆတွေး”(ဆဆ=၆၆)
အဓိမောက္ခမှာ ဆုံးဖြတ်သည့် သဘောဖြစ်ရာ ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောဖြစ်သည့် မောဟမူစိတ်မှ ဝိစိကိစ္ဆာနှင့် မယှဉ်ပေ။
ဒွေးပဉ္စဝိညာဏ် ၁၀ မှာလည်း အာရုံ ဝတ္ထု ထိခိုက်မှုကြီးမား၍ ဆုံးဖြတ်မှု မပါဝင်ပါ။
အဓိမောက္ခ မယှဉ်သော စိတ် စုစုပေါင်း ၁၁ ပါးကို စိတ် ၁၂၁ ပါးမှ နုတ်က ယှဉ်သော စိတ် ၁၁၀ ဖြစ်၏။
“ပဉ္စဝိညာဉ်၊ ဝိစိကြဉ်၊ ဓိယှဉ် သုဉ်ဧက်ဧး” (သုဉ်ဧက်ဧး=၀၁၁၊ နောက်ကပြန်၍ယူသော် ၁၁၀)
ဝီရိယမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပြုလုပ်ခြင်းသဘောဖြစ်ရာ မယှဉ်သော စိတ်များမှာ -
အာရုံယူရာမှာ အားသိပ်မကောင်းလှသည့် သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း ၂၊ သန္တီရဏ ၃၊ ပဉ္စဒွါရာဝဇန်း ၁၊
စုစုပေါင်း ၁၆ ပါးကို စိတ်အကျဉ်း ၈၉ မှ နုတ်က ၇၃၊ စိတ်အကျယ် ၁၂၁ မှ နုတ်က ၁၀၅ ပါး ရ၏။
“ပဉ္စဝိညာဉ်၊ သံ,သန်,ပဉ်၊ ကြဉ် ဝီ ဗျည်းသုဉ်းဧး” (ဗျည်းသုဉ်းဧး=၅၀၁၊ ဂဏန်းပြန် ၁၀၅)
ပီတိမှာ နှစ်သက်ခြင်းသဘောဖြစ်ရာ ဥပေက္ခာနှင့် မယှဉ်ပေ။ ဒေါသမူနှင့်လည်း မယှဉ်ပေ။
အကုသိုလ်စိတ်ထဲမှ သောမနဿ ၄ ပါး၊
အဟိတ်စိတ်ထဲမှ ၂ ပါး (သောမနဿ သန္တီရဏ + ဟသိတုပ္ပါဒ)
ကာမာဝစရသောဘနစိတ်ထဲမှ ၁၂ ပါး (ကုသိုလ် ၄ + ဝိပါက် ၄ + ကြိယာ ၄)
ရူပါဝစရစိတ်များမှ ၉ ပါး (ပထမဈာန် ၃ + ဒုတိယဈာန် ၃ + တတိယဈာန် ၃)
လောကုတ္တရာစိတ်များမှ ၂၄ ပါး
စုစုပေါင်း စိတ် ၅၁ ပါးနှင့် ယှဉ်၏။
“စ-ဈာန်ကြဉ်ပစ်၊ သောကျန်စစ်၊ ‘ပီ’ဖြစ် ပဉ္စဧး” (ပဉ္စဧး = ၅၁)
မောဟမူဒွေးမှာ တွေတွေဝေဝေဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆန္ဒမလိုပေ။
အဟိတ်စိတ် ၁၈ ပါးစလုံးမှာလည်း ဆန္ဒ မယှဉ်ပေ။
မောဟမူစိတ် ၂ ပါး + အဟိတ်စိတ် ၁၈ ပါး = ပေါင်း ၂၀ ကို ၈၉ မှ နုတ်က ၆၉၊ ၁၂၁ မှ နုတ်က ၁၀၁ ပါး ရ၏။
“မောမူ,အဟိတ်၊ စိတ်နှစ်ဆယ်ပစ်၊ အကျန်စစ်၊ ‘ဆန်’ဖြစ် ဧက်သုဉ်ဧး” (ဧက်သုဉ်ဧး = ၁၀၁)
အကုသိုလ်စေတသိက် ၁၄ ပါးမှာ ပထမ ၄ ပါးဖြစ်သော ‘မောဟ, အဟိရိက, အနောတ္တပ္ပ, ဥစ္ဓစ္စ’တို့မှာ ‘အကုသလသာဓာရဏ’ အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း အမြဲတမ်း တွဲလျက် ပါ၏။
ထို့ကြောင့် အကုသိုလ်စိတ် ၁၂ ပါးလုံးနှင့် ယှဉ်၏။
အကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်က တွေဝေမှု မောဟ၊ သဘောအမှန်ကို မသိမှု မောဟ ပါ၏။ အကုသိုလ်ပြုရမှာ မရှက်သော အဟိရိက၊ အကုသိုလ်ပြုရမှာ မကြောက်သော အနောတ္တပ္ပ၊ စိတ်မတည်ကြည်မှု ဥဒ္ဓစ္စတို့ ပါ၏။
“မောစတုက်စု၊ ယှဉ်တုံမှု၊ အကု တစ်ဆယ့်နှစ်”
လောဘသည် ဒေါသနှင့် မည်သည့်အခါမျှ အတူတူ မဖြစ်ပေ။
လောဘသည် ဒေါသမူ ၂ ပါး၊ မောဟမူ ၂ ပါးတို့နှင့် မယှဉ်။
လောဘသည် လောဘမူစိတ် ၈ ပါးနှင့်သာ ယှဉ်၏။
ဒိဋ္ဌိဂတသမ္ပယုတ်စိတ်နှင့်သာ ယှဉ်၍ လောဘမူစိတ်ထဲမှ ၄ ပါးနှင့်သာ ယှဉ်၏။
မာနသည် ဒိဋ္ဌိနှင့် အတူတူ မယှဉ်သဖြင့် လောဘမူစိတ်ထဲမှ ဒိဋ္ဌိဂတဝိပ္ပယုတ်စိတ် ၄ ပါးနှင့်သာ ယှဉ်၏။
ဒိဋ္ဌိနှင့်မာနကို လိုဏ်ဂူတစ်ခုထဲ၌ အတူမအောင်းနိုင်သည့် ခြင်္သေ့မင်းနှစ်ကောင်ဟု ဥပမာပေး၏။
“ခန္ဓာငါးဝ၊ ဒိဋ္ဌိကမူ၊ အတ္တဟုစွဲ၊ မာနခဲမှာ၊ ငါ,ငါ,ငါဟု၊ စွဲလမ်းပြုသဖြင့်၊ နှစ်ခုပြိုင်ကြ၊ အားတူမျှ၍၊ တကွစဉ်လာ၊ မယှဉ်သာသည်၊ ပမာခြင်္သေ့နှစ်စီးတည်း”
လောဘ၊ ဒိဋ္ဌိ၊ မာန သုံးပါးတို့မှာ လောဘမူစိတ် ၈ ပါးနှင့်သာ ဆိုင်၏။ လောဘမူစိတ်အားလုံးနှင့်ယှဉ်, တချို့နှင့်ယှဉ်သာ ကွာ၏။
“လော လောဘမူ၊ ဒိဌ် သံ ယူ၊ မာမူ ဝိပ်လေးဖြစ်”
ဒေါသ၊ ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယ၊ ကုက္ကုစ္စ
ဒေါသ၊ ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယ၊ ကုက္ကုစ္စတို့မှာ ဒေါသမူစိတ် ၂ ပါးနှင့်သာ ယှဉ်၏။
ဣဿာဆိုသည်မှာ သူတစ်ပါး၏ စည်းစိမ်ကို ဝန်တိုခြင်းဖြစ်ရာ မခံချင်မှု ဒေါသလေးပါ၏။
မစ္ဆရိယမှာ လောဘကို အခြေခံသော်လည်း သူများနှင့် ဆက်ဆံသည်ကို မခံနိုင်သည့်အခါ လောဘမရှိတော့ဘဲ ဒေါသဖြစ်၏။
“မပေးရက်လျှင်း၊ ဝန်တိုခြင်း၌၊ ကြောင်းရင်းလောဘ၊ ရှိချေကလည်း၊ သူများနှင့်ဖက်၊ ဆက်ဆံချက်ကို၊ စိတ်ဆက်မပိုင်၊ မခံနိုင်၍၊ တွဲဆိုင်ဒေါသ၊ ပါလေရသည်၊ လောဘ ထိုခါ ချုပ်ပြီတည်း”
ကုက္ကုစ္စမှာ ပြုပြီးသော မကောင်းမှုကို ပြန်၍ နောင်တရခြင်း၊ မပြုမိခဲ့သော ကောင်းမှုအတွက် ပြန်ပြီး နောင်တရခြင်းဖြစ်သော စိတ်မချမ်းသာမှုဖြစ်ရာ ဒေါသမူဒွေးမှာသာ ယှဉ်၏။
“ဒေါစတုက်မူ၊ ယှဉ်ရာယူ၊ ဒေါမူ စိတ်စုံနှစ်”
ထိနက စိတ်၏ မခန့်ခြင်းဟု မြန်မာပြန်၏။ စိတ်၏ ထိုင်းမှိုင်းခြင်း ဖြစ်၏။ မိဒ္ဓမှာ စေတသိက်တို့၏ ထိုင်းမှိုင်းခြင်း ဖြစ်၏။
ထိနမိဒ္ဓသည် သသင်္ခါရိကစိတ် ၅ ပါးနှင့်သာ ယှဉ်၏။
ဝိစိကိစ္ဆာစေတသိက်မှာ ဝိစိကိစ္ဆာစိတ် ၁ ပါးနှင့်သာ ယှဉ်၏။ စေတသိက်အားလုံးထဲတွင် စိတ်အနည်းဆုံးနှင့် ယှဉ်သော စေတသိက် ဖြစ်သည်။
“ထိ,မိဒ် သသင်၊ ငါးမှာယှဉ်၊ ဝိစင် ဝိစိဖြစ်”
(ထိနမိဒ္ဓနှစ်ခုသည် အကုသိုလ်စိတ် တစ်ဆယ့်နှစ်ခုတွင် သသင်္ခါရိကစိတ် ငါးခုမှာ တစ်ပေါင်းတည်းသာ ယှဉ်သည်။ ယှဉ်သည်ဆိုသော်လည်း အမြဲမဟုတ်၊ ရံခါယှဉ်သည်။
‘ဝိစင်’ဆိုသည်ကား ဝိစိကိစ္ဆာစေတသိက်ကို ဆိုသည်။ ယင်းဝိစိကိစ္ဆာစေတသိက်သည် ဝိစိကိစ္ဆာသမ္ပယုတ်စိတ်တစ်ခုမှာ ယှဉ်သည် ဟု ဆိုလို၏။)
သောဘနစိတ် ၂၅ ပါး
“သဒ္ဓါ သတိ၊ ဟိရိ, သြတ္တပ်၊ ဟိတ် နှစ်ရပ်၊ တတြမဇ္ဈတ္တတာ”
“ပဿဒ္ဓိ, လဟု၊ မုဒု, ကမ္မဉ်၊ ပါဂုညင်နှင့်၊ ထိုပြင် ဥဇုက၊ ခြောက်ဓမ္မ၊ ကာယ, စိတ်နှင့် နှော”
“ငြိမ်း, ပေါ့, နူးညံ့၊ ကျန်းခံ့, လေ့လာ၊ ဖြောင့်စင်းစွာ၊ ခြောက်ဖြာ ကိစ္စဟော”
“သောဘဏတွင် အကုန်ယှဉ်၊ ဤလျှင် ဆယ့်ကိုး သော”
အလောဘ၊ အဒေါသကို ‘ဟိတ် နှစ်ရပ်’ ဆိုသည်။ ‘သဒ္ဓါ’၊ ‘သတိ’၊ ‘ဟိရီ’၊ ‘သြတ္တပ္ပ’၊ ‘အလောဘ’၊ ‘အဒေါသ’၊ ‘တတြမဇ္ဈတ္တတာ’ ၇ ပါး။
ကာယပဿဒ္ဓိ၊ စိတ္တပဿဒ္ဓိ၊ ကာယလဟုတာ၊ စိတ္တလဟုတာ၊ ကာယမုဒုတာ၊ စိတ္တမုဒုတာ၊ ကာယကမ္မညတာ၊ စိတ္တကမ္မညတာ၊ ကာယပါဂုညတာ၊ စိတ္တပါဂုညတာ၊ ကာယုဇုကတာ၊ စိတ္တုဇုကတာ = ၁၂ ပါးနှင့် ပေါင်းသော် သောဘနသာဓာရဏစေတသိက် ၁၉ ပါး ဖြစ်၏။
သောဘနသာဓာရဏစေတသိက် ၁၉ ပါးတို့သည် သောဘနစိတ်များဖြစ်ကြသော -
ကာမာဝစရသောဘနစိတ် ၂၄ ပါး၊ ရူပါဝစရစိတ် ၁၅ ပါး၊ အရူပါဝစရစိတ် ၁၂ ပါး၊ လောကုတ္တရာစိတ် အကျဉ်း ၈ ပါး/အကျယ် ၄၀ = စုစုပေါင်း သောဘနစိတ် အကျဉ်း ၅၉ ပါး၊ အကျယ် ၉၁ ပါးတို့နှင့် ယှဉ်၏။
ဝိရတီစေတသိက် ၃ ပါး
ဝိရတီစေတသိက် ၃ ပါးမှာ သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မန္တ၊ သမ္မာအာဇီဝတို့ ဖြစ်၏။
ဝိရတီစေတသိက် ၃ ပါးတို့သည် ကာမာဝစရကုသိုလ်စိတ် ၈ ပါး၊ လောကုတ္တရာစိတ် ၈ ပါး သို့မဟုတ် ၄၀ နှင့် ယှဉ်၏။
လောကီဝိရတီ၊ လောကုတ္တရာဝိရတီ ခေါ်၏။
ကာမာဝစရကုသိုလ်စိတ်နှင့် ယှဉ်သောအခါ ၃ ပါးစလုံး တစ်ပြိုင်နက် မယှဉ်နိုင်။ တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ခုစီသာ ယှဉ်နိုင်၏။
လောကုတ္တရာစိတ်တွင်မူ ၃ ပါးစလုံး တစ်ပြိုင်နက် ယှဉ်၏။
“ကာမကု ရှစ်၊ လောကုတ်ရှစ်၊ ဖြစ်ရာ ဝိရတီ”
“ကာမကုမှာ၊ ယှဉ်တုံပါ၊ ရံခါ အသီးသီး”
“လောကုတ်ရှစ်မှာ၊ ယှဉ်တုံပါ၊ မြဲစွာ တစ်ပေါင်းတည်း”
အပ္ပမညာ ၂ ပါး
ကရုဏာမှာ ဒုက္ခိတသတ္တဝါ ပညတ်ကို အာရုံပြု၍ သနားခြင်းသဘော၊ မုဒိတာမှာ သုခိတသတ္တဝါ ပညတ်ကို အာရုံပြု၍ ဝမ်းမြောက်ခြင်းသဘော ဖြစ်၏။
ကရုဏာနှင့် မုဒိတာမှာ ကာမာဝစရကုသိုလ်စိတ် ၈ ပါး၊ ကာမာဝစရကြိယာစိတ် ၈ ပါး၊ ရူပါဝစရ ပထမဈာန် ၃ ပါး, ဒုတိယဈာန် ၃ ပါး, တတိယဈာန် ၃ ပါး, စတုတ္ထဈာန် ၃ ပါး = စုစုပေါင်း ၂၈ ပါးတို့၌ ယှဉ်၏။
ကရုဏာနှင့် မုဒိတာစေတသိက်တို့သည်လည်း အမြဲတမ်းယှဉ်ကြသည်မဟုတ်။ ရံခါသာ ယှဉ်ကြ၏။ ယှဉ်ပြန်ကလည်း အာရုံယူရာ မတူသောကြောင့် ၂-ခု တစ်ပြိုင်တည်း မယှဉ်နိုင်ပေ။
“မဟာကြိ ကု၊ ပ, ဒု, တ, စ၊ ရူပ ဆယ့်နှစ်၊ နှစ်ဆယ့်ရှစ်၊ ဖြစ်လေ ပမညာ”
“ကိစ္စအာရုံ၊ အခွင့်ကြုံ၊ ဖြစ်တုံ သီးသီးသာ”
ဉာဏသမ္ပယုတ်နှင့်သာ ယှဉ်သောကြောင့် အကုသိုလ်စိတ်၊ အဟိတ်စိတ်များနှင့် မယှဉ်ပေ။
ကာမာဝစရသောဘနစိတ် ၂၄ ပါးအနက် ဉာဏသမ္ပယုတ်စိတ် ၁၂ ပါး၊ ရူပါဝစရ ၁၅ ပါး၊ အရူပါဝစရ ၁၂ ပါး၊ လောကုတ္တရာစိတ် ၈ သို့မဟုတ် ၄၀ = စုစုပေါင်း ၄၇ ပါး သို့မဟုတ် ၇၉ ပါးတို့၌ ယှဉ်၏။
‘အနိယတ’ဆိုတာ အမြဲမဟုတ်တာကို ဆိုလိုတယ်။ ‘နိယတ’ကတော့ အမြဲပေါ့။
‘ဣဿာ’၊ ‘မစ္ဆရိယ’၊ ‘ကုက္ကုစ္စ’၊ ‘ဝိရတီ ၃ ပါး (သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မန္တ၊ သမ္မာအာဇီဝ)’၊ ‘အပ္ပမညာ ၂ ပါး (ကရုဏာ၊ မုဒိတာ)’၊ ‘မာန’၊ ‘ထိန’၊ ‘မိဒ္ဓ’ = အားလုံးပေါင်း ဒီ ၁၁ ပါးကို အနိယတယောဂီလို့ ခေါ်တယ်။
ဣဿာစေတသိက်ဟာ ဒေါသမူစိတ်ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း ယှဉ်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူများစည်းစိမ်ကို ငြူစူတဲ့အခါသာ ယှဉ်တယ်။
မစ္ဆရိယကလည်း နောင်တ ပူပန်တဲ့အခါမှာသာ ယှဉ်တယ်။ ဒေါသမူဖြစ်တိုင်း ယှဉ်တာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီလိုပဲ ကုက္ကုစ္စ၊ ဝိရတီ ၃ ပါး၊ အပ္ပမညာ ၂ ပါး၊ မာန၊ ထိန မိဒ္ဓတို့လည်း ရံခါပဲ ယှဉ်တယ်။
ကျန် စေတသိက် ၄၁ ပါးကို နိယတယောဂီလို့ ခေါ်တယ်။ ဆိုင်ရာ စိတ်ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်းမှာ ယှဉ်တယ်။
အဘိဓမ္မာသင်တန်း အပတ်စဉ် (၁၃) ပို့ချချက်များ
… အတူတူဖြစ်ကြတဲ့ နာမ်တရားတွေ။ အာရုံတစ်ခုတည်း ယူနေကြတဲ့ နာမ်တရားတွေထဲမှာ ဒါက စိတ်ပဲ၊ ဒါက စေတသိက်ပဲ … ဖဿပဲ … ဝေဒနာပဲလို့ ပြောဖို့ အင်မတန် ခဲယဉ်းတာကို မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသွားတယ်။ အဲဒီလို ဟောကြားတော်မူသွားတာကို အာရုံပြုပြီးတော့ ဘုရားကို ပူဇော်သောအားဖြင့်လည်းပဲ အဘိဓမ္မာကို လေ့လာထိုက်တယ်။
ပြီးတော့လည်း အဘိဓမ္မာနားလည်ရင် ဘုရားစာဖတ်ရတာ ပိုပြီးတော့ နားလည်လိမ့်မယ်။ ပိုပြီးတော့ လေးလေးနက်နက် ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အဘိဓမ္မာမတတ်ဘဲ ဖတ်တာနဲ့ အဘိဓမ္မာတတ်ပြီးမှ ဖတ်တာနဲ့ ကွာတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သိလာလိမ့်မယ်။
တစ်ခါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တရားထိုင်လာတဲ့အခါမှာ တွေ့တာ ကြုံလာတာတွေကျတော့လည်း အဘိဓမ္မာတတ်ထားရင် ပိုပြီးတော့ လေးလေးနက်နက် နားလည်တယ်၊ သိတယ်၊ အသိဉာဏ် ပိုပြီးတော့ ရှင်းတယ်။
ဒီ အဘိဓမ္မာဗဟုသုတကို ကိုယ့်နေ့စဉ် ဘဝမှာလည်းပဲ သုံးသွားရမယ်။
အခု ကုသိုလ်ဆိုတာ ဘာ … အကုသိုလ်ဆိုတာ ဘာ … သိပြီဆိုရင် အကုသိုလ်မဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရမှာပေါ့။ ကုသိုလ်ကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားပြီး ဆည်းပူးရမှာပေါ့။
ရှေးတုန်းက အဘိဓမ္မာမသင်ခဲ့စဉ် ကုသိုလ် အကုသိုလ်ဆိုတာ သေချာ မသိခဲ့ကြဘူး။ သာမညလောက်သာ သိတယ် မဟုတ်လား။ တကယ့်တကယ်ကျတော့ မသိဘူး။
အဘိဓမ္မာတတ်လာပြီဆိုရင် ကုသိုလ် အကုသိုလ်ကို ခွဲခွဲခြားခြား တကယ် သိလာတယ်။ သိလာရင် သိတဲ့အလိုက် (အကုသိုလ်ကို) ရှောင်နိုင်တယ်။ (ကုသိုလ်ကို) ဆောင်နိုင်တယ်။
မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူတဲ့ ဂါထာလေး ရှိတယ်။
ဧတံ ဗုဒ္ဓါန သာသနံ။” ဆိုတာ မဟုတ်လား။
“အလုံးစုံသော အကုသိုလ်ကို မပြုခြင်း၊ ကုသိုလ်တရားတို့ကို ပြည့်စုံစေခြင်း၊ စိတ်ကို ဖြူစင်အောင် ထားခြင်း။”
ဒါ … မြတ်စွာဘုရားရဲ့ … မြတ်စွာဘုရားတွေရဲ့ အဆုံးအမပဲ။
အဘိဓမ္မာ မတတ်ရင် အဲဒီ အဆုံးအမလေးတောင်မှ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပြည့်ပြည့်ဝဝ နားလည်မလဲ။
ဒါကြောင့် အဘိဓမ္မာတတ်ရတာ အလွန် ကျေးဇူးများတယ်။
‘သမာဒါန’ဆိုတာက ‘သံ’ရယ်၊ ‘အာ’ရယ်၊ ‘ဒါန’ရယ် ပေါင်းထားတာ။
ဆောက်တည်တယ် … ယူတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ထွက်တယ်။ သိက္ခာပုဒ် သီလယူထားတယ်၊ ဘုရားရှေ့မှာ ယူတယ်၊ ဘုန်းကြီးထံက ယူတယ် … အဲဒီလိုမျိုးကို ခေါ်တယ်။
ဒကာတစ်ယောက် တစ်နေ့ တောထဲ မသွားမီ ဘုန်းကြီးဆီမှာ သီလယူတယ်။ တောထဲရောက်တော့ စပါးကြီးမြွေက ပတ်တာ ခံရတယ်။ သူ့မှာလည်း ခုတ်ထစ်စရာ ဓားပါတယ်။ ပထမတော့ မြွေကြီးကို ခေါင်းဖြတ်ပြီး သတ်မယ်လို့ လုပ်သေးတယ်။
နောက်တော့ သူစဉ်းစားမိတယ်။ “သြော် … မနက်က ဆရာတော်ထံမှာ သီလယူခဲ့တယ်။ သီလယူခဲ့ပါလျက်နဲ့ သီလကို ချိုးလို့ မသင့်တော်ဘူး။ ကိုင်း … ဒီမြွေကြီးပတ်လို့ သေချင်သေပေစေတော့ … အသေသာခံမယ်။ ယူထားတဲ့ သိက္ခာပုဒ်ကို မချိုးတော့ဘူး”ဆိုပြီး ဓားကြီးကို လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။
အဲဒီလို လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးရော မြွေကြီးကလည်း ရစ်ပတ်ထားတာကို ဖြေပြီး တခြားထွက်သွားသတဲ့။
ဒီလို သိက္ခာပုဒ်ယူထားပြီးမှ ရှောင်တာမျိုးကို သမာဒါနဝိရတီလို့ ခေါ်တယ်။
မဂ်ရတဲ့အခါ ဖြစ်တဲ့ ဝိရတီ ဖြစ်တယ်။
မဂ်နဲ့ ကိလေသာတွေကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပြီး ဖြစ်သွားတယ်။ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသာ ရတဲ့ ဝိရတီဖြစ်တယ်။
မှတ်သားစရာကတော့ သမ္မာဝါစာ, သမ္မာကမ္မန္တ, သမ္မာအာဇီဝ ဆိုတဲ့ ဒီဝိရတီစေတသိက် ၃-ပါးဟာ လောကီစိတ်တွေနဲ့ ယှဉ်တဲ့အခါ တစ်ခုခုသာ တစ်ကြိမ်တည်းမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဆိုပါတော့ … သတ်တာကို မသတ်ဘဲ ရှောင်လိုက်ရင် သမ္မာကမ္မန္တပဲ ရှိမယ်၊ လိမ်ပြောစရာကို လိမ်မပြောဘဲ ရှောင်လိုက်ရင် သမ္မာဝါစာပဲ ရှိမယ်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဒုစရိုက်မှ ရှောင်လိုက်ရင် သမ္မာအာဇီဝပဲ ဖြစ်မယ်။
လောကုတ္တရာစိတ်နဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ၃-ခုစလုံး တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်တယ်။ အဲဒါ လောကုတ္တရာစိတ်ရဲ့ ဆန်းကြယ်ပုံပေါ့။
အပ္ပမညာဆိုတာ အတိုင်းအရှည် မရှိသော သတ္တဝါပညတ်ကို အာရုံပြုသော စေတသိက်တဲ့။
အတိုင်းအရှည်ကို ပါဠိလို ‘အပမာန’လို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီလို အတိုင်းအရှည် မရှိသော သတ္တဝါပညတ်ကို အာရုံပြုတာကြောင့် ဒီစေတသိက်တွေကို အပ္ပမညာစေတသိက်လို့ ခေါ်တယ်။
အပ္ပမညာစေတသိက် ၂-ခုက ‘ကရုဏာ’နဲ့ ‘မုဒိတာ’ ဖြစ်တယ်။
ဒုက္ခိတ သတ္တဝါပညတ်ကို အာရုံပြု၍ သနားခြင်း သဘော။
ဒုက္ခိတဆိုတာ ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်နေသော သတ္တဝါ၊ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သတ္တဝါပေ့ါ။ အဲဒီ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သတ္တဝါကို အာရုံပြုပြီးတော့ သနားတဲ့ သဘောလေးကို ကရုဏာလို့ ခေါ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ ‘သတ္တဝါ’လို့ ပြောလိုက်တာကြောင့် မရမတ္ထ မဟုတ်တော့ဘဲ ပညတ်ဖြစ်သွားတယ်။ တစ်ယောက်ယောက် ဒုက္ခရောက်နေပြီလို့ ကြားသိရရင် သနားတဲ့စိတ် ဖြစ်တတ်တယ် မဟုတ်လား၊ အဲဒါပဲ။
‘သနားတယ်’ဆိုတာ အဲဒီသတ္တဝါ လက်ရှိ ခံစားနေရတဲ့ ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်စေလိုတဲ့ စေတနာ၊ လွတ်မြောက်စေလိုတဲ့ ဆန္ဒကို ခေါ်တယ်။
ပါဠိလို ကရုဏာပို့ “ဒုက္ခာမုဉ္စတု”၊ ဆင်းရဲမှ လွတ်ပါစေဆိုတာ ကြားဖူးမှာပေါ့။
ကရုဏာက သောဘနသာဓာရဏစေတသိက်၊ ကောင်းတဲ့ စေတသိက်တွေနဲ့သာ ယှဉ်တယ်။ မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ မယှဉ်ဘူး။
ဒါကြောင့် သနားတာသာ ရှိရမယ်၊ သနားတာက ကျော်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲမယ် ဒေါမနဿဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကရုဏာမဟုတ်တော့ဘူး။
ဒီနိုင်ငံမှာ ကရုဏာက ကျော်လွန်ပြီးတော့ ဒေါမနဿထဲ ရောက်နေတာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေကို ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်ခန်းတွေမှာ စမ်းတဲ့အခါကျတော့ မခံချင်ဘဲ ထအော်ကြ ဆူကြ … ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား။ အဲဒါ ကရုဏာအစစ် မဟုတ်ဘူး။ ကရုဏာအတုပဲ။ ကရုဏာရဲ့ ရန်သူဟာ ဒေါမနဿပဲလို့ ပြောရတယ်။
ကရုဏာဆိုတာ ကောင်းတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား သက်သက်ပဲ။ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်နေ ခံနေရတဲ့ သတ္တဝါတွေကို ဆင်းရဲဒုက္ခမှ လွတ်စေချင်တယ်။ ကရုဏာဆိုတာ ဒါပဲ။
သုခိတသတ္တဝါပညတ်ကို အာရုံပြု၍ ဝမ်းမြောက်ခြင်း သဘော။
ကောင်းစားနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို မြင်ရင် ကိုယ်က ဝမ်းမြောက်တယ်။ ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာဟာ ဒီပုဂ္ဂိုလ် ဒီအခြေအနေက မလျောကျပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ ဆန္ဒ။ “ယထာလဒ္ဓသမ္ပတ္တိတော မာဝိဂစ္ဆန္တု”လို့ ပါဠိမှာ ဆိုကြတာ ရှိတယ်။
မုဒိတာက ဣဿာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်။ ဣဿာက သူများကောင်းစားတာကို မနာလိုဘူး။ မုဒိတာက သူများ ကောင်းစားတာကို ဝမ်းသာတယ်။
ကရုဏာဖြစ်ဖို့ လွယ်တယ်။ မုဒိတာဖြစ်ဖို့ ခက်တယ်။
ကရုဏာကို ဒုက္ခိတသတ္တဝါပညတ်သာမက ကောင်းစားနေတဲ့သူ၊ ရိုးရိုးလူ၊ သတ္တဝါတိုင်းကို ဒီဘဝထဲ ဒါမှမဟုတ် နောက်ဘဝ ဒုက္ခဆင်းရဲ ရောက်နိုင်တယ်၊ အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း ဆင်းရဲတွေကိုလည်း မလွဲမသွေ ခံကြရမှာဖြစ်လို့ ကရုဏာပွားလို့ ရတယ်။
ဒီမှာ အပ္ပမညာ ၂ ပါးသာ ပြပြီး၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်းမှာ အပ္ပမညာ ၄ ပါးလို့ ဆိုလိမ့်မယ်။ အဒေါသ (မေတ္တာ), ကရုဏာ, မုဒိတာ, တတြမဇ္ဈတ္တတာ (ဥပေက္ခာ)။
အပ္ပမညာ ၄ ပါးနဲ့ ဗြဟ္မဝိဟာရ ၄ ပါး အတူတူပဲ။
သူက ပညိနြေ္ဒ တစ်ခုတည်း ရှိတယ်။
အာရုံကို အမှန်အတိုင်း သိခြင်း သဘော။
ပညိနြေ္ဒ - သိတဲ့နေရာမှာ အစိုးတရလည်း ဖြစ်တယ်၊ ပညာလည်း ဟုတ်တယ်။
(အာရုံကို အမှားသိတာကတော့ ဒိဋ္ဌိလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ မောဟလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။)
ဒီမှာ ဆိုလိုတဲ့ ပညာက တကယ့်ကို ရုပ်နာမ်သဘောကို ထိုးထွင်းသိတဲ့ ပညာကို ဆိုလိုတယ်။
အမှန်အတိုင်းဆို သင်ကြားတဲ့ တတ်မြောက်တဲ့ ပညာတွေကို ပညာလို့ မခေါ်ဘူး။ ‘ဗဟုသုတ’ ဒါမှမဟုတ် ‘အတတ်’လို့သာ ခေါ်ရမယ်။
ပါဠိတော်တွေမှာ ပညာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရုပ်နာမ်သဘောကို အမှန်အတိုင်း ထိုးထွင်း သိတာမျိုး၊ သစ္စာလေးပါးတရား, နိဗ္ဗာန်ကို ထိုးထွင်းပြီး သိတာမျိုး အဓိပ္ပာယ်နဲ့သာ အသုံးပြုတယ်။
ဒီပညာစေတသိက်ဟာ ဘယ်တော့မှ အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ မယှဉ်ဘူး။ အဟိတ်စိတ်နဲ့ မယှဉ်ဘူး။
ကာမာဝစရသောဘနစိတ်ထဲမှာတောင် ဉာဏသမ္ပယုတ်နဲ့သာ ယှဉ်တယ်။ ဉာဏဝိပ္ပယုတ်နဲ့ မယှဉ်ဘူး။
ပညာကို မှောင်နေတဲ့ အခန်းထဲမှာ မီးထွန်းလိုက်လို့ လင်းသွားတာနဲ့ ဥပမာပေးတယ်။
ပညာပေါ်လာမှ ရုပ်နာမ်ရဲ့ သဘောတရားကို ထင်ထင်လင်းလင်း သိသွားလို့ ဖြစ်တယ်။
ပညိနြေ္ဒကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖြစ်ဖို့က တရားထိုင်ရမယ်။ စ,စချင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ သမာဓိဖြစ်ပြီးနောက် ပညာလာတော့တာပဲ။
ပညာကို အမောဟလို့လည်း ခေါ်တယ်။ ဉာဏ်လို့လည်း ခေါ်တယ်။ အတူတူပဲ။
ကဲ … အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ စေတသိက် ၅၂ ပါး ဖြစ်သွားပြီ။ အညသမန်းစေတသိက် ၁၃ ပါး၊ အကုသိုလ်စေတသိက် ၁၄ ပါး၊ သောဘနစေတသိက် ၂၅ ပါး။
ပရမတ္ထတရားတွေကို လေ့လာတဲ့အခါ တကယ့် အသေးစိတ် စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် အဖက်ဖက်က နားလည်အောင် လေ့လာတဲ့အခါ ‘လက္ခဏာ’(အမှတ်အသား၊ သဘောလက္ခဏာ)အားဖြင့် နားလည်ရမယ်။ ‘ရသ’(အလုပ်လုပ်ပုံ၊ အကျိုး)အားဖြင့် နားလည်ရမယ်။ ‘ပစ္စုပဋ္ဌာန်’(ပေါ်လာတဲ့ ရင်မှာထင်လာတဲ့ အခြင်းအရာ)အားဖြင့် နားလည်ရမယ်။ ‘ပဒဋ္ဌာန်’(နီးသောအကြောင်း)အားဖြင့် နားလည်ရမယ်။ ဒီ ၄-မျိုးနဲ့ နားလည်ရမယ်။
ဒီ လက္ခဏာ၊ ရသ ပြောပြတဲ့ နေရာမှာ မဟာစည်ဆရာတော်ပေးတဲ့ ရှင်းပြတဲ့ ဥပမာလေး သိပ်ကောင်းတယ်။
…. ယောဂီကတော့ မြင်တာပဲ၊ သိလိုက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ လက္ခဏာပဲ … ဒါဟာ ရသပဲလို့ မသိလိုက်ဘူး။ ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုရင် လျှပ်စီးလက်လိုက်တဲ့အခါ ကြည့်နေတဲ့သူဟာ လျှပ်စီးမြင်လိုက်သလားဆိုတော့ မြင်တယ်။ လျှပ်စီးက ဘယ်လို လက္ခဏာရှိသလဲ၊ ဘယ်လို အခြင်းအရာရှိသလဲ၊ လျှပ်စီးရဲ့အကြောင်းဟာ ဘယ်လိုလဲ မေးရင် သူပြောချင်မှ ပြောတတ်မှာ။
နားလည်သူတွေကတော့ ပြောလိမ့်မယ်။ လျှပ်စီးဆိုတာ တောက်ပတဲ့ လက္ခဏာရှိတယ်ပေါ့၊ ဝင်းသွားတယ်၊ ဝင်းလက်သွားတာနဲ့ အမှောင်ကို ပယ်ဖျောက်နိုင်တဲ့ ကိစ္စရှိတယ်။ သူ့ရသက အမှောင်ကို ပယ်ဖျောက်ခြင်း။ အခြင်းအရာက ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက် ဘာညာပေါ့။ နီးတဲ့အကြောင်းက လေ, မိုး, အပူဓာတ်, အအေးဓာတ် စသည်ပေါ့။ ….
အဲဒီလိုပဲ … တရားအားထုတ်တဲ့အခါ မြင်တော့ မြင်ကြတာပဲ။ ဒါပေမယ်လို့ တစ်ခါတလေ မသိလိုက်ဘူး။ တကယ် တရားထိုင်ပြီးတော့ ဂရုစိုက်ပြီး မှတ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒီလိုဖြစ်ပါလား၊ ဒီလို အခြင်းအရာရှိပါလားလို့ သိလာတယ်။
အဲဒီလို လက္ခဏ၊ ရသ၊ ပစ္စုပဋ္ဌာန်၊ ပဒဋ္ဌာန် ဒီ ၄-မျိုးနဲ့ နားလည်မှ ပြည့်ပြည့်ဝဝ နားလည်တယ် ဆိုရတယ်။
ကောင်းပြီ … အခု စေတသိက် ၅၂ ပါးစလုံး လေ့လာပြီးပြီ။ အဲဒီ ၅၂ ပါးမှာ ခပ်ဆင်ဆင် တူရာလေးတွေ ပြောရဦးမယ်။
ဝိတက်၊ စေတနာ၊ မနသိကာရ
ဒီသုံးခုဟာ ဆင်ဆင်တူတယ်။ သို့သော် သဘောတရားချင်း လက္ခဏာချင်း ကွဲတယ်။
ဝိတက်က ယှဉ်တရားတွေကို အာရုံပေါ် တင်ပေးတယ်။
စေတနာက တင်ပေးတဲ့ တရားတွေကို အာရုံနဲ့ တွဲကပ်နေအောင် ဆက်စပ်ပေးတယ်။
မနသိကာရက အာရုံဆီ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း သွားအောင် ထိန်းကျောင်းပေးတယ်။
လောဘ - လိုချင်မှုက ငြိကပ်မှု စေးကပ်မှု ပါတယ်။
ဆန္ဒ - လိုချင်မှုက ငြိကပ်မှု အစေးမပါဘူး။
သညာ၊ ဝိညာဉ်၊ ပညာ
သညာ - အာရုံကို မှတ်သိရုံမျှသာ ဖြစ်၏။ အနိစ္စ, ဒုက္ခ, အနတ္တဟု သိအောင် မစွမ်းနိုင်။
ဝိညာဉ် - အာရုံကိုလည်း သိ၏။ အနိစ္စ, ဒုက္ခ, အနတ္တ လက္ခဏာသုံးပါးကိုလည်း ထိုးထွင်း သိ၏။ သို့သော အဆင့်ဆင့်တက်၍ အရိယာမဂ်ဖြစ်ရန် မစွမ်းနိုင်။
ပညာ - အာရုံကိုလည်း သိ၏။ လက္ခဏာသုံးပါး ထိုးထွင်း သိ၏။ အဆင့်ဆင့်တက်၍ အရိယာမဂ် ဖြစ်၏။
ကျမ်းဂန်၌ ဥပမာပေးသည်မှာ ရွှေငွေရာပြတ်ပွဲမင်း၏ ပျဉ်ချပ်စားပွဲခုံ၌ တင်ထားသော ငွေအသပြာအစုကို ရောင်းဝယ်ရေး၌ သညာသိနှင့်တူသည့် အသိဉာဏ်မဖြစ်သေးသော သူငယ်တစ်ယောက်သည် ငွေအသပြာတို့၏ တို, ရှည်, ဝန်းဝိုင်း ပုံပန်းသဏ္ဍာန်မျှသာ သိ၏။ ပိုက်ဆံအဖြစ် သုံးရသည်ကိုမူ မသိ။
ဝိညာဉ်သိနှင့်တူသည့် ရွာသား ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်မှာမူ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုလည်း သိ၏။ သုံးလို့ရသည်ကိုလည်း သိ၏။ အသပြာ၏ ငွေအစစ် ဖြစ်သည် မဖြစ်သည်ကိုမူ မသိ။
ရာပြတ်ပွဲမင်းနှင့်တူသည့် ပညာသိကမူ အသပြာစု၏ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အသုံး၊ ဇစ်မြစ်အစုံ အကုန်သိ၏။
စေတသိက် ၅၂ ပါးတို့အကြောင်း လေ့လာပြီးသွားပြီဖြစ်ရာ စိတ်ယှဉ် စေတသိက်ယှဉ်တို့ကို သင်္ဂြိုဟ်လာ သမ္ပယောဂနည်း၊ သင်္ဂဟနည်းနှင့် ဝိသုဒ္ဓါရုံဆရာတော်ကြီး၏ မိဿကနည်းတို့အနက် သမ္ပယောဂနည်းဖြင့် စတင် လေ့လာကြရ၏။
ညနေ ၅ နာရီခွဲခန့်တွင် သင်တန်းပြီး၍ နာရီဝက်ခန့် အနားယူချိန် ပေး၏။
ညနေ ၆ နာရီတွင် စိန်စည်ဆရာတော်က သမဏနတ်သားအကြောင်း တရားတော်ကို ဟောကြား ချီးမြှင့်သွားပြီး ကောင်းမှု ကုသိုလ်အစုစုတို့ကို အမျှပေးဝေကြလေသည်။
ဆရာတော်အရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသ၏ sketch ကို ပန်းချီဆရာ A. K. Moe ရေးဆွဲ ပူဇော် ကျေးဇူးပြု၏။
Posted by LokaChantha at 2:08 PM No comments:
သံသရာကူးမြောက်ရေးတရားတော် (၃) - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
အဲဒါဟာ ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် သိပြီး ကျင့်လာခဲ့တာပဲ။ အဲဒီလို သိလာတာကို ဓမ္မစကြာတရားမှာ ဒီလို ဟောထားတယ်။
“မဇ္ဈိမပဋိပဒါဆိုတဲ့ အကျင့်လမ်း ငါတွေ့လာပြီ။
အဲဒီ မဇ္ဈိမပဋိပဒါအကျင့်ကို ကျင့်ရင် မျက်စိလဲ ပွင့်တယ်။
နိဗ္ဗာန်ကိုလဲ မျက်မှောက်ပြုတယ်” လို့ ဒီလို ဟောထားတယ်။
ဘုရားကိုယ်တိုင် ကျင့်သိခဲ့တဲ့ ဝိပဿနာတရား
အဲဒါဟာ တခြား မဟုတ်ဘူး။ ခုနက ပြောတဲ့ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ အဖြစ်အပျက်ကို ရှုတဲ့ ဝိပဿနာပဲ။
အခု ဒီမှာ ဘုန်းကြီးတို့ ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ပေါ်လာသမျှ ရုပ်နာမ်တွေကို ရှုနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
စပြီး ရှုခါစမှာတော့ အဖြစ်အပျက်တွေ မသိသေးပါဘူး။
သမာဓိဉာဏ် အားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ ရှုတိုင်း ရှုတိုင်းဟာ ဘယ်ဟာမှ တည်မြဲနေတာ မရှိဘူး။ အကုန်လုံး ပေါ်လာပြီး ပျောက်သွား၊ ပေါ်လာပြီး ပျောက်သွားနဲ့ မမြဲတဲ့ တရားချည်းပဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင် တွေ့ရတယ်။
အဲဒီလို တွေ့ရအောင်လို့ ရှေးဦးစွာ သမာဓိဖြစ်အောင် ရှုရတယ်။
မြင်တိုင်း ကြားတိုင်း တွေ့တိုင်း သိတိုင်းတွေ အကုန်လုံး ရှုရမှာ။
အစမှာတော့ အကုန်လုံး လိုက်ရှုနေရင် သမာဓိဖြစ်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။
နည်းနည်းက စပြီး ရှု
ဒါကြောင့် နည်းနည်းက စပြီး ရှုဖို့ရာ ဘုန်းကြီးတို့က ညွှန်ကြားထားတယ်။
ဝင်သက်ထွက်သက် ရှူတိုင်း ရှိုက်တိုင်း ဝမ်းဗိုက်က တောင့်တင်း လှုပ်ရှားတဲ့ ဝါယောဓာတ်က စပြီးတော့ “ဖောင်းတယ် ပိန်တယ်”လို့ ရှုဖို့ ဒီက စပြီး ညွှန်ပြထားပါတယ်။
ဒိပြင်နေရာကလဲ ဒီလို နည်းနည်းက စပြီး ရှုရင် ရပါတယ်။
ဥပမာ ထိုင်နေစဉ်မှာ တစ်နေရာက ညာဘက်က ထိလိုက်၊ ဘယ်ဘက်က ထိလိုက်နဲ့ အဲဒီ ထိတာကို ထိတယ်၊ ထိတယ်လို့ ဒီလိုလဲ မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ်လို့ အဲဒါကတော့ ကိုယ်က ရပ်ချင်ရင် ရပ်ထားလို့ ရတယ်။ မြန်မြန် ရှုချင်ရင်လဲ ရတယ်။ ဖြည်းဖြည်း ရှုချင်ရင်လဲ ရပါတယ်။ ကျိန်းမသေဘူး။ ဟောဒီ ဖောင်းတာ ပိန်တာကတော့ ကျိန်းသေတယ်။ ဖောင်းတာ ဆုံးရင် ပိန်တာပဲ။ ပိန်တာ ဆုံးရင်လဲ ဖောင်းတာပဲ။ ကိုယ်က ရပ်ထားလို့လဲ မရဘူး။ နှေးအောင်လဲ လုပ်လို့ မဖြစ်ဘူး။ မြန်အောင်လုပ်လို့လဲ မဖြစ်ဘူး။ နှေးအောင် မြန်အောင် တမင်တကာလဲ လုပ်လို့ မရဘူး။ အဲဒီတော့ သူက သမာဓိဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
ရိုရိုသေသေသာ ရှု၊ ရိုရိုသေသေ ရှုလို့ရှိရင် မကြာခင် သမာဓိဖြစ်လာတယ်။ သမာဓိဖြစ်ရင် ဉာဏ်လဲ ဖြစ်တာပဲ။ သမာဓိကို မှီပြီးတော့ အသိဉာဏ်ဖြစ်မှ ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ် ဖြစ်တာ။ စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီး သိရုံနဲ့ကတော့ ဉာဏ်အစစ် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါက သညာသိတွေ တဲ့။
မြတ်စွာဘုရားက အဲဒီလို ကိုယ်တော်တိုင် တွေ့သိပြီးတော့မှ ဒီဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ အဖြစ်အပျက်ကို သိအောင် ရှုရတယ်ဆိုတဲ့ ရှုပုံရှုနည်းကို အမျိုးမျိုးသော နည်းတို့ဖြင့် ဟောထားပါတယ်။
သတိပဋ္ဌာန်မှာဆိုရင် ကာယာနုပဿနာ၊ ဝေဒနာနုပဿနာ၊ စိတ္တာနုပဿနာ၊ ဓမ္မာနုပဿနာလို့ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးဖြင့် ရှုပုံတွေ လေးမျိုး ဟောထားတယ်။
အဲဒီလို မြတ်စွာဘုရားက ကိုယ်တိုင် သိပြီးတော့ ဟောထားတဲ့ တရားဟာ သမ္မာဒက္ခာတ - ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မှန်ကန်စွာ ဟောထားတာပဲ။
ဘုန်းကြီးတို့ တရားအားထုတ်ပြီး ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတွေလဲ ကျင့်ပြီးမှ ကိုယ်တိုင် သိပြီးမှ ဟောရတာ။
ကိုယ်တိုင် မသိဘဲနဲ့ စာတွေ့နဲ့ ဟောလို့ရှိရင် အချိုးကျဖို့ရာ သိပ်မလွယ်ဘူး။
ဟောတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ကိုယ်တိုင်ကျင့်မှ၊ ကျင့်ဖူးတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ်တိုင် တွေ့ဖူးတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ စာတွေ့မျှနဲ့ ဟောလို့ရှိရင် သဘာဝကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ မလွယ်ပါဘူး။
ကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီး ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ ဟောမှ အဲဒီလို ဟောရင် ကောင်းစွာ ဟောတာပဲ။
ဒါကြောင့် သမ္မာဒက္ခာတေ - ကောင်းမွန်စွာ ဟောကြား၍ ထားအပ်သော
ဓမ္မေ - တရားတော်၌
ဓမ္မနုပဿီနော - တရားတော်ကို အစဉ်လျှောက်၍ ကျင့်သုံးကြလေကုန်၏ တဲ့။
အဲဒီလို ဟောထားတဲ့ တရားတော်ကို အစဉ်လျှောက်ပြီး ကျင့်ပါ။ တရားတော်အတိုင်း လိုက်နာပြီး ကျင့်ပါလို့ ဆိုလိုတယ်။
ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ ခေါ်တဲ့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတရား ပွားများရမယ်လို့ ဟောထားတာဟာ မြင်တိုင်း ကြားတိုင်း ဒွါရခြောက်ပါးက ပေါ်တိုင်း ပေါ်တိုင်း ပေါ်လာသမျှ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာတို့၏ အဖြစ်အပျက်ကို ရှုပြီး မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ပွားများစေရမယ်လို့ ဟောထားတာပါပဲ။
အဲဒီအတိုင်း ကျင့်ရမှာ။ သတိပဋ္ဌာန်မှာဆိုရင် ကိုယ်အမူအရာတွေ ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း၊ စိတ်အမူအရာ ဖြစ်တိုင်း၊ ဝေဒနာဖြစ်တိုင်း၊ သဘောတရားတွေဖြစ်တိုင်း ရှုရမယ်လို့ ဟောထားတယ်။ အဲဒီအတိုင်း ရှုရမှာ။
အဲဒီနည်းလဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ စာပေကျမ်းဂန်တွေ လေ့လာပြီးတော့ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာကို သရုပ်ခွဲ ဆင်ခြင်ပြီး ရှုတာကတော့ ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ သုတ္တန်တရားတော်နဲ့အညီ လိုက်နာကျင့်တယ်လို့ မဆိုနိုင်ဘူး။
အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ တစ်ချို့က အားထုတ်ဖို့ မလိုဘူးဆိုပြီး ဟောနေတာတွေလဲ ရှိသေးတယ်။
ဒီဆိပ်ခွန်ရွာမှာတော့ ဘုန်းကြီးတို့ အခံရှိနေလို့ တော်တာ။ တရားမှန် လုပ်ငန်းမှန်က ဒီမှာ ရှိနေတော့ မဟုတ်တယုတ်တရားတွေ ဒီမှာ မဝင်လာနိုင်ဘူး။ ဒါ … အင်မတန်ကို ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာ။
အဲဒီလို တရားမှန် မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ မဟုတ်တယုတ်တရားတွေက ခုနေ တော်တော် ပြန့်နေတယ်။
တရားအားထုတ်ဖို့ မလိုဘူး၊ စိတ်ကလေး စိတ်အတိုင်းထား၊ ပြီးတာပဲလို့ဆိုတော့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလဲ ဘာမှ မပြုကြဘူး။
ကုသိုလ်တွေလဲ ဆုတ်ယုတ် ပျက်စီးကုန်တယ်။ တရားလဲ တိုးတက်ဖို့ရာ ဘာမှ မရှိဘူး။ တရားမှန်လဲ မဟုတ်ဘူး။ အင်မတန် သနားစရာ ကောင်းပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတို့က တရားဟောရင်း ဟောရင်းလဲ အဲဒီလို တရားမှားတွေ ဖော်ပြရတယ်။
ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေ အကျိုးယုတ်အောင်လို့ ဒီလို ရည်ရွယ်ချက် မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ တရားမှားတွေကို ယုံကြည်ပြီးတော့ မှားကုန်မှာ စိုးလို့ အကုသိုလ်ပွားကုန်မှာ စိုးလို့ အဲဒီလို အမှားတွေ ဖော်ပြရတယ်။
ဟောဒီ ဆိပ်ခွန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အင်မတန် ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ။
သတိပဋ္ဌာနသုတ်ဆိုတာ အင်မတန် ခိုင်မာတာပဲ။ ဒီလောက် ခိုင်မာတဲ့ တရား ဘယ်ရှိမတုန်း။
ဧကာယနော အယံ ဘိက္ခဝေ မဂ္ဂေါ၊
ဘိက္ခဝေ - ရဟန်းတို့
အယံ မဂ္ဂေါ - ဤသတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတည်းဟူသော ခရီးသည်
ဧကာယနော - တစ်ခုတည်းသော လမ်းပေတည်း၊ တစ်ကြောင်းတည်းသော ခရီးပေတည်း တဲ့။
သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာ တစ်ခုတည်းသော ခရီး၊ တစ်ခုတည်းသော လမ်း၊ တစ်လမ်းတည်းပဲ။ တစ်ကြောင်းတည်းပဲ။
ဘယ်သွားတဲ့ လမ်းတုန်းဆိုရင် -
သတ္တာနံ ဝိသုဒ္ဓိယာ - သတ္တဝါတွေမှာ ကိလေသာတွေ စင်ကြယ်ဖို့ရာပဲ။ ဒီလမ်းပဲ။
သောက ပရိဒေဝါနံ သမတိက္ကမာယ - စိုးရိမ်ပူဆွေး ငိုကြွေးခြင်းတွေကို ကျော်လွန်ဖို့ရာလဲ ဒီလမ်းပဲ။
ဒုက္ခဒေါမနဿာနံ အတ္ထင်္ဂမာယ - ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲတွေ ချုပ်ငြိမ်းဖို့ရာ ဒီလမ်းပဲ လို့ ဟောထားပါတယ်။
အဲဒါတွေလဲ အသေးစိတ် ဟောပြရင်တော့ အင်မတန် ကောင်းတာပါပဲ။
ဘုန်းကြီးက အခုတော့ အချိန် မကြာစေချင်လို့ မဟောသေးပါဘူး။ တိုတိုပဲ ဟောပါတယ်။
ဉာယဿ - အရိယမဂ်ဉာဏ်ကို
အဓိဂမာယ - ရရန်အလို့ငှာ
နိဗ္ဗာနဿ သစ္ဆိကိရိယာယ - နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရန်အလို့ငှာ
ဧကာယနောမဂ္ဂေါ - တစ်ခုတည်းသော လမ်း၊ တစ်ကြောင်းတည်းသော ခရီးပေတည်း။
(သာဓု … သာဓု … သာဓု)
အရိယာမဂ်ရဖို့ နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့လဲ ဒီတစ်လမ်းထဲပဲ ရှိတယ်။
အရိယာမဂ်ရရင် ဖိုလ်လဲရတာပါပဲ။ မဂ်အကြောင်းတရားကို သိရင် ဖိုလ်အကျိုးတရားလဲ ပေါ်လာတာပဲ။ ဒါကြောင့် မဂ်ရတယ်ဆိုရင် ဖိုလ်လဲ ရတာပဲ။ ဗမာစကားကတော့ မဂ်ဖိုလ်ရတယ်လို့ ဖိုလ်ပါ တစ်ပေါင်းတည်း ပြောမှ ပေါ်လွင်တယ်။
သြကာသနဲ့ ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါလဲ “မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် နိဗ္ဗာန်ကို လျင်မြန်စွာ ရပါလို၏။ မဂ်ချမ်းသာ ဖိုလ်ချမ်းသာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ရပါလို၏” လို့ ဒီလို ဆုတောင်းကြတယ်။
အဲဒီတော့ မဂ်နဲ့ ဖိုလ်က တွဲလျက်ပဲ။ မဂ်ရရင် ဖိုလ်လဲ ရတာပဲ။ တွဲလျက်ဆိုမှ ပိုပြီး ပေါ်လွင်တယ်။
နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာလဲ ဒီလမ်းပဲ။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာ သတိပဋ္ဌာန်လမ်းတစ်ခုတည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ရှိရင် ဘယ်လမ်းက သွားမလဲလို့ မေးရင် ဘယ့်နှယ် ပြောမတုန်း?
(သတိပဋ္ဌာန်လမ်းက သွားမယ်လို့ ပြောမှာပါ ဘုရား)
ဆိပ်ခွန်မှ ရွှေဘိုဆီ မော်တော်ကားနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ လမ်းရှိတယ် မဟုတ်လား။ ဒီတစ်လမ်းပဲ ရှိတာပဲ။ ကားနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင် ဒိပြင်လမ်းက သွားလို့ မဖြစ်ဘူး။ ဒီလမ်းကပဲ သွားရမှာ။ ဒိပြင်လမ်းက သွားရင် မရောက်ဘဲ နေမှာပေါ့။
အရှေ့ဘက်၌ ရှိရာ အရှေ့ဘက်က မသွားဘဲနဲ့ အနောက်ဘက်က သွားရင် လွဲမှာပေါ့။ တောင်ဘက်သွားလဲ လွဲမှာပဲ။ မြောက်ဘက်သွားလဲ လွဲမှာပဲ။ အရှေ့ဘက်လမ်းအတိုင်း တည့်တည့်မတ်မတ် သွားမှ ….. အဲဒီလိုပဲ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို ရဖို့ရာ ဒီသတိပဋ္ဌာန်လမ်းတစ်ခုထဲ ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီလမ်းကပဲ သွားရလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို ဘုန်းကြီးက ဆောင်ပုဒ်ကလေး အတိုချုပ် လုပ်ထားရတယ်။
သတိပဋ္ဌာန်လမ်းကို လိုက်ရမယ်” တဲ့။
နိဗ္ဗာန် မဂ်ဖိုလ် ရောက်ရချင်လို့ရှိရင် သတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်နဲ့ လိုက်ပြီး ကျင့်ရမယ်။ ဒီတစ်လမ်းတည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီလို မကျင့်ရင် ရောက်နိုင်ပါ့မလား။
မဂ်ဖိုလ်လဲ မရောက်နိုင်ဘူး။ နိဗ္ဗာန်လဲ မရောက်နိုင်ဘူး။ ဒီလမ်းက သွားမှ ရောက်မှာ။ ကိုင်း အဲဒီ ဆောင်ပုဒ်ကို ဆိုကြရမယ်။
နိဗ္ဗာန်မဂ်ဖိုလ် ရချင်လို့ ရောက်ချင်လို့ ရှိရင် သတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကို လိုက်ရမယ်။ ဒီတစ်လမ်းပဲ ရှိတော့ ဒီလမ်းက တစ်ခါတည်း လိုက်သွားမှ၊ ဒီလမ်းအတိုင်း ကျင့်မှ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် ရမယ်။
အဲဒါကို ဒီလို ဟောတယ်။
ဓမ္မေ - မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူအပ်သော တရားတော်၌
ဓမ္မာနု ဝတ္တိနော - တရားတော်ကို အစဉ်လျှောက်၍ ကျင့်သုံးကြလေကုန်၏။
သတိပဋ္ဌာန်မှာ ဟောထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ်အမူအရာ ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း ရှုရမယ်။
ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း ရှုဆို ….. ဖြစ်နေတုန်း ရှုရမှာ။
ဂစ္ဆန္တောဝါ - သွားသည်ရှိသော်
ဂစ္ဆာမီတိ - သွားသည်ဟူ၍
နေ့လယ်တုန်းက ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက တရားနာ ပရိတ်သတ်တွေလဲ အဆိုခိုင်းပြီးတော့ ဟောသွားတယ်။ အဲဒါ သွားနေတုန်း သွားနေဆဲကို သိရမှာ။ အဲဒါကို သွားတုန်း ရှုရမှာပဲ။ ထို့အတူပဲ ရပ်တုန်း၊ ထိုင်တုန်း၊ လျောင်းတုန်း၊ ကွေးတုန်း၊ ဆန့်တုန်း ကိုယ်အမူအရာတွေ ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း၊ စိတ်အမူအရာတွေ ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း၊ ဝေဒနာတွေ ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း၊ သဘောတရားတွေ ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း ရှုရတယ်။
သဘောတရားဆိုတာ မြင်မှု ကြားမှုတွေလဲ ပါတယ်။ မြင်ဆဲ ကြားဆဲ နံဆဲ စားဆဲ သိဆဲမှာ မြင်ပြီးပြီးချင်း၊ ကြားပြီးပြီးချင်း၊ နံပြီး စားပြီး ထိပြီး သိပြီး ချက်ချင်း ချက်ချင်း ရှုရမှာ။ အဲဒါကို ရှုဖို့ရာပါပဲ။ အဲဒါ သတိပဋ္ဌာန်လမ်းတဲ့။
ဓမ္မစကြာမှာ ဟောထားတဲ့ မဇ္ဈိမပဋိပဒါဆိုတာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးပဲ။ ဒီသတိပဋ္ဌာန်လမ်းပဲ။ အတူတူပါပဲ။ ဒီလို ရှုရတာပါပဲ။ ဒီလို ရှုလို့ သမာဓိဉာဏ်အား ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ သူ့အခိုက်အတန့်နဲ့သူ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် -
သမ္မာဒက္ခာတော - ကောင်းမွန်စွာ ဟောကြား၍ ထားအပ်သော
အဲဒီလို ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှ နိဗ္ဗာန်ကို ရောက်နိုင်တာ။ အဲဒါကိုလဲ ဘုန်းကြီးက ဆောင်ပုဒ်ကလေး စီထားတယ်။
လိုက်စားကျင့်ကြသူတွေသာ” တဲ့ … ဆိုရမယ်။
“ဘုရားဟောထား၊ မြတ်တရား၊ လိုက်စားကျင့်ကြသူတွေသာ”
ဘုရားဟောတဲ့ တရားတော်အတိုင်း လိုက်နာပြီး ကျင့်သုံးကြသူတွေ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာ ဟိုဘက်ကမ်း ရောက်မယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
တေဇနာ - မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်ကို အစဉ်လျှောက်၍ ကျင့်သုံးကြသော ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်
ပါရံ - အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း အစရှိသော ဆင်းရဲခပ်သိမ်းတို့၏ ငြိမ်းရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ဟိုဘက်ကမ်းသို့
ဧဿန္တိ - မကွေ့မကောက် ဆိုက်ရောက်ကြပေကုန်လတ္တံ့။
အဲဒီလို ကျင့်ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသာလျှင် ဟိုဘက်ကမ်းရောက်မှာ … ဆင်းရဲခပ်သိမ်းငြိမ်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတဲ့။
အဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာကလဲ သေမင်း၏ နယ်ပယ်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ သံသရာကြီးကို ကျော်လွန်နိုင်မှ၊ အဲဒီလို ကျော်လွန်ဖို့ရာကလဲ မလွယ်ဘူး။
ဒါကလဲ မြတ်စွာဘုရားက ဟောဖော်ပြထားတယ်။
သုဒုတ္တရံ - ကျော်လွန်ခြင်းငှာ ခဲယဉ်းလှစွာသော
မစ္စုဓေယျံ - သေမင်း၏ နယ်ပယ်ကို
ဥတ္တရိတွာ - ကျော်လွန်၍
ပါရံ - ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ဟိုဘက်ကမ်းသို့
ဧဿန္တိ - မကွေ့မကောက် ဆိုက်ရောက်ကြကုန်လတ္တံ့။
သေမင်း၏ နယ်ပယ်ကို ကျော်ဖို့ရာက မလွယ်ဘူးတဲ့။
သေမင်းနယ်ပယ်ကျော်တယ်ဆိုတာ အရိယာမဂ်ဖိုလ်ရမှ … နောက်ဆုံး အရဟတ္တမဂ်ဖိုလ် ရမှပဲ။
အဲဒီလို အရိယာမဂ်ဖိုလ် အရဟတ္တဖိုလ် ရဖို့ရာ သာသနာပမှာဆိုရင် နည်းလမ်းတောင် မရှိဘူး။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါတွေ အနည်းငယ်လောက်သာ ရှိတယ်။
သာသနာတွင်းမှာလဲ နည်းလမ်းမှန်နဲ့ ကျကျနန ကျင့်မှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ကျင့်မှ …. ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင် နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူးတဲ့။
နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာ မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်း အချိုးတကျ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်းတင်းရင်းရင်း ကျင့်မှ သေမင်းနယ်ပယ် ကျော်လွန်တာတဲ့။
သေမင်းနယ်ပယ်ဆိုတာ အင်မတန် ဆိုးဝါးတယ်။
သေမင်းနယ်ပယ်ဆိုတာ တခြား မဟုတ်ဘူး။ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာတွေ မပြတ် ဖြစ်နေတဲ့ သံသရာကို ပြောတာပဲ။
ပဋိသန္ဓေက စပြီးတော့ ရုပ်နာမ်တွေ မပြတ် ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ သေပြန်ပြီ။ သေပြီးတော့လဲ သေခါနီးက စွဲလမ်းခဲ့တဲ့ အာရုံကလေး စွဲပြီးတော့ ဘဝသစ် ဖြစ်သွားပြန်တယ်။ အဲဒီမှာလဲ အိုနာသေပြန်ပြီ။ သေပြီးလဲ ဘဝအသစ်ဖြစ် … သေပြီးလဲ ဘဝအသစ်ဖြစ်နဲ့ ဒီလို အစဉ်ဆက်ပြီးတော့ သွားနေတာ။
အဲဒီလို သွားနေတဲ့ သံသရာလို့လဲ ဆိုရတဲ့ ရုပ်နာမ်အစဉ်မှာ သေခြင်းကတော့ နောက်ဆုံးသတ်ပဲ။ ရုပ်နာမ်အစဉ်က သူ့နယ်ပယ်ပဲ။ ဒီရုပ်နာမ်အစဉ်တွေ ရှိလို့ သေရတာ။ ရုပ်နာမ်အစဉ်တွေ မရှိရင် မသေနိုင်ဘူး။
ရုပ်နာမ်တွေ မရှိဘဲနဲ့ ဘယ်သေမလဲ။ ရုပ်နာမ်မရှိရင် မသေနိုင်ဘူး။ ရုပ်နာမ်အထည်ကိုယ်တွေ ရှိနေလို့ သေရတာပဲ။
အဲဒီ ရုပ်နာမ်အထည်ကိုယ်တွေ ရုပ်နာမ်အစဉ်တွေ မပြတ် ဖြစ်နေတဲ့ သံသရာဟာ သေမင်းရဲ့ နယ်ပယ်ပဲ။
သူ့နယ်ပယ်ထဲနေရင် သူ့သြဇာအတိုင်း လိုက်နာရမှာမို့ တစ်နေ့ကျရင် သေရမှာချည်းပဲ။
မသေခင် ဘယ့်နှယ်မှ မတတ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီ သေမင်းရဲ့ နယ်ပယ် ကျော်လွန်ဖို့ရာကလဲ ခဲယဉ်းပါတယ်။
တရားကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သေနယ်ကို လွန်သွားကြတယ်
အဲဒီလို ကျော်လွန်ဖို့ရာ ခဲယဉ်းတဲ့ သေမင်းရဲ့ နယ်ပယ်ကို မြတ်စွာဘုရားတရားတော်အတိုင်း လိုက်နာပြီးတော့ ကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ကျော်လွန်သွားကြတယ်။ ဘုရားတပည့်တွေပေါ့။
ဘုရားအဆုံးအမကို လိုက်နာပြီးတော့ ကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာ မဂ်လေးပါး ဖိုလ်လေးပါး ရောက်ပြီး ကိလေသာ ကင်းငြိမ်းလို့ရှိရင် သေခါနီးကျတော့လဲ ဘာမှ မစွဲလမ်းတော့ဘူး။ မစွဲလမ်းတော့ ဘဝသစ် ရုပ်နာမ်ခန္ဓာတွေ မဖြစ်တော့ဘူး။ မဖြစ်တော့ မအိုရ မနာရ မသေရဘူး။ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းတယ်။ ဒါကို ပြောပါတယ်။
ယေဇနာ - အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်
သမ္မာဒက္ခာတေ - ကောင်းစွာ ဟောအပ်သော
ဓမ္မာနုဝတ္တိနော - တရားတော်ကို အစဉ်လျှောက်၍ ကျင့်သုံးကြလေကုန်၏။
တေဇနာ - ထိုမြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတဲ့ တရားတော်ကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးကြသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်
မစ္စုဓေယျံ - သေမင်း၏ နယ်ပယ်ဖြစ်သော ရုပ်နာမ်အစဉ် သံသရာကို
ပါရံ - နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ဟိုဘက်ကမ်းသို့
ဧဿန္တိ - မကွေ့မကောက် ဆိုက်ရောက်ကြပါလိမ့်မည် တဲ့။
ဘုန်းကြီးက ဆောင်ပုဒ်ကလေး စီထားတယ်။
ခုနကဟာနဲ့ တွဲပြီးတော့ ဆိုလိုက်မှ ပိုပြီးတော့ ရှင်းမယ်။
၁။ “ဘုရားဟောထား၊ မြတ်တရား၊ လိုက်စားကျင့်သူတွေသာ။
၂။ သေနယ်ဆိုးဝါး၊ ဤကမ်းအား၊ ကျော်သွား ဟိုကမ်း ရောက်ကြမှာ” တဲ့။
သေနယ်ဆိုတာ အင်မတန် ဆိုးဝါးတဲ့ သံသရာ ဝဋ်ဆင်းရဲတွေပဲ။ အဲဒီ သံသရာ ဝဋ်ဆင်းရဲတွေဟာ ဒီဘက်ကမ်းပဲ။
သေနယ်ဆိုးဝါး ဤကမ်းအား … အဲဒီကမ်းကို လို့ ဆိုလို့ရမှာပါပဲ။
သို့သော်လဲ ဗမာလင်္ကာအစပ်က “အား”နဲ့ပဲ ရတယ်။
“သေနယ်ဆိုးဝါး၊ ဤကမ်းအား၊ ကျော်သွား ဟိုကမ်းရောက်ကြမှာ”။
ကိုင်း … ပထမအပိုဒ်ကလေးက စပြီး ဆိုရမယ်။
၁။ ဘုရားဟောထား၊ မြတ်တရား၊ လိုက်စား ကျင့်ကြသူတွေသာ။
၂။ သေနယ်ဆိုးဝါး၊ ဤကမ်းအား၊ ကျော်သွား ဟိုကမ်းရောက်ကြမှာ။
အဲ … အခု တရားနာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတော်မူတဲ့ တရားတော်တွေကို လိုက်နာပြီးတော့ ကျင့်ကြတာပဲ။
တရားတော်ကို ရိုရိုသေသေ နာကြ။ နာပြီးတော့ ကျင့်လဲ ကျင့်ကြ။
များသောအားဖြင့် တရားနာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက တရားအားထုတ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ များပါတယ်။ နောင်လဲ အားထုတ်ဖို့ရာ လိုလားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။
ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်း လာပြီး အားထုတ်နိုင်ရင် ကျောင်းလာပြီး အားထုတ်ပေါ့။
ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းရှိနေတာ အင်မတန် နေရာကျတယ်။
တစ်ချို့နေရာမှာ ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်း မရှိလို့ တရားအားထုတ်ချင်ပေမယ့် မထုတ်ရဘူး။ ဆရာမရှိ ဘာမရှိနဲ့ … သနားစရာပါပဲ။
ဒီမှာတော့ အင်မတန် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဌာနကလဲ ရှိနေတယ်။ ဒီဌာနမှာ တရားအားထုတ်နိုင်အောင်လို့ စပ်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလဲ အကူအညီတွေ ပေးနေကြတယ်။ ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကလဲ ဟောပြော ပြသနေတယ်။
တရားတွေ အားထုတ်ကြတာ အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း ကင်းရာဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာပဲ။
အဲဒါ ဘုန်းကြီးများကလဲ တစ်ခါ တစ်ခါ လာပြီးတော့ အကူအညီပေးရတယ်။ အားပေးရတယ်။
ဟော … အခု နာရီက တော်တော်ကြာသွားပြီ။ ၄၅ မိနစ်လောက် အများဆုံး ဟောတော့မယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားတာ အခု မိနစ် ငါးဆယ်လောက် ရှိသွားပြီ။ ငါးဆယ်တောင် ကျော်သွားပြီလို့ ထင်တယ်။ တစ်နာရီပြည့်ခါနီး ရောက်သွားတယ်။ ဘုန်းကြီးအတွက် ဒီတင် ရပ်ဦးမှ တော်မှာပဲ။ နောက်ပိုင်းက သလ္လာဝတီ ဦးသူရိယက ဆက်ဟောပါလိမ့်ဦးမယ်။ ရိုရိုသေသေ နာကြပေတော့။
အခု ဟောပြတဲ့ တရားတော်အတိုင်း မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူတဲ့ တရားတော်တွေကို ရိုရိုသေသေ … အဲဒီ တရားတော်နဲ့အညီ လိုက်နာပြီးတော့ ကျင့်ကြံရမယ်။
ကျင့်ပုံက သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာ တိုက်ရိုက် ရှိတယ်။
အဲဒီအတိုင်း ကျင့်ဖို့ရာ ဘုန်းကြီးတို့ကလဲ ဟောထားတော့ ဒီမှာ သိပြီးသားတွေပါပဲ။ ထပ်ပြီးတော့ ဟောတာကတော့ အားပေးတဲ့အနေနဲ့ ဟောရတာ။
ဒီအတိုင်း ကျင့်လို့ရှိရင် ….. ရုပ်နာမ်ခန္ဓာတွေ မပြတ်ဖြစ်ပြီး သေ,သေနေကြရတဲ့ သေမင်းနယ်ပယ်က ဆိုးဝါးတယ်။ အဲဒီ ဆိုးဝါးတဲ့ သေမင်းရဲ့ နယ်ပယ်ဆိုတာ ဒီဘက်ကမ်းပဲ။ သေမင်းနယ်ပယ်မှ လွတ်တဲ့ အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း ကင်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဟာ ဟိုဘက်ကမ်းပဲ တဲ့။
ဒါကြောင့် သေနယ်ဆိုးဝါး ဤကမ်းပါးကို ကျော်လွန်ပြီးတော့ အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း ကင်းတဲ့ … ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို ရောက်ကြလိမ့်မယ်။
တရားကျင့်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ရောက်တန်သလောက် ရောက်နေပါပြီ။ နောက်ဆက်ပြီးတော့ အားထုတ်ခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျလို့ရှိရင် ဆင်းရဲခပ်သိမ်း အကုန်ငြိမ်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတော့မှာပဲ။
ဒါကြောင့် အဲဒီ … မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူတဲ့ ဒေသနာတော်နှင့်အညီ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားသော ဒေသနာတော်ကို ရိုသေ လေးစားသောအားဖြင့် တရား ဒေသနာတော်နှင့်အညီ ကျင့်ကြံ ပွားများ အားထုတ်ကြသည်ဖြစ်၍ မိမိတို့ အလိုရှိအပ်သော မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို လျင်မြန်စွာ ဆိုက်ရောက်၍ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။
(ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်စုံရပါလို၏ အရှင်ဘုရား)
Posted by LokaChantha at 5:15 PM 1 comment: